Home News Barakac ka bilaawday Deegaano hoostaga Gobolka Shabeelada Hoose
Saacadihii la soo dhaafay waxaa dagaal u dhaxeeyay Ciidamada Dowladda iyo Al-Shabaab uu ka dhacay deegaanka Jilib Marka oo ka mid ah deeganada hoostaga Magalada Marka ee Xarunat gobolka Shabeellaha Hoose.
Dagaalkaas oo soo gaaray xalay fiidkii ayaa waxaa uu saameyn ku yeeshay dadka ku nool deegaanka Jilib marka,kuwaas oo sheegay inay casbi dareemeen.
Mid ka mid ah dadka deegaanka jilib Marka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in badi dadkii ku sugnaa deegaankaas ay barakaceen,iyaga oo ka casbi qaba inay waxyeelo ka soo gaarto dagaalkaas
Saraakiisha Ciidamada Dowladda ee Gobolka Shabeellaha eek u sugan Magalada Marka aya waxa ay sheegeen inay wadaan howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab,isla markaana ay doonayaan inay la wareegaan deegaano dhowr ah.
Dadka deegaanka Jilib Marka ayaa waxa ay sheegeen in weli uu socodo barakaca ay sameynayaan si aysan dhibaato uga soo gaarin dagaalka u dhaxeeya Al-Shabaab iyo Ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Magalada Marka iyo tuulooyinka hoostaga waxaa ku sugan Ciidamo ka tirsan kuwa Millateriga Soomaaliya gaar ahaan kuwa Guutada 14-ka Octoober,kuwaas oo dhowr bil kahor kala wareegay Al-Shabaab.
Previous articleKoox hubeysan oo Magaalada Boosaaso ka abuurtay xiisad amni daro
Next articleCiidamo uu hogaaminayo Kornel Caare oo weerar ku qaaday fariisin ay Ciidamada Somaliland ku leeyihiin Deegaanka Ceel Afweyn
Odayaasha DDS oo isku dayaya in ay xaliyaan mushkilada Jig-jiga ka...